केपी ओलीसँग भगवान् विष्णु र महेश्वर पनि हार खान्छन् ! - Sidha News
दिलनिशानी मगर सन् १९८० यता निरन्तर ३७ वर्षदेखि जिम्बाब्वेमा एकछत्र राज गर्दै आएका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले पदबाट दिएको राजीनामा पत्र संसद् भवनभित्र सभामुखले वाचन गरेर सुनाएपश्चात सासंदहरू खुसीले बुरुकबुरुक नाँचेका थिए । सत्ताका भेट्रान खेलाडी मुगाबेको सन् २०१९ सेम्टेम्बर ६ मा निधन भयो ।
तर त्यस्तो अवसर नेपालका सांसदहरूलाई नमिलेको लगभग ४ वर्ष हुनै आँट्यो । खुशी हुँदै नाचगान गर्नका लागि १४९ जना सासंदले यसपटक अन्तिम प्रयास त गरे, तर सकेनन् । रामचन्द्र पौडेलसँग हाँसीमजाक गर्दै आफ्नै ध्यानमा मस्त रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धेरै समयको अन्तरालमा दाँतमा ढुंगा लागेको छ
त्यसपछि संविधान मिच्ने कामको शिलशिला अनवरत गरेका छन् भनेर उनीमाथि आरोप छ । सर्वदलीय सहमतिविना नै उनले अख्तियार लगायतका कैयौं संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत आफ्नै निकटका मानिसहरूलाई फटाफट नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ । माओवादीले नारामा मात्रै सत्ता कब्जा गरेका थिए ।
ओलीले व्यवहारतः सत्ता कब्जा गरेर देखाइदिए भन्ने टिप्पणी सुनिन थालेको छ । यतिसम्म कि वर्षौंदेखि नियमित चल्दै आएको शपथग्रहणको भाषाको प्रतिज्ञा भन्ने शब्दलाई “त्यो पर्दैन” बोलीबाट टारिदिए ।त्यो प्रतिज्ञा भन्ने शब्द शायद उनलाई मन नपरेका कारण हुनसक्छ, हालै जारी भएको सपथसम्बन्धी अध्यादेशमा त्यो शब्द नै हटाइएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई तिमी शब्द प्रयोग गर्दा अपमान भयो भनेर रिसाउने ओलीले संविधानको सम्मान चाहिँ के कति गरेका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । युगाण्डाका तानाशाह ईदी अमिनलाई जे मन पर्छ, त्यही संविधान हुन्थ्यो ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले एक मिडियासँग कुरा गर्दै भनेका छन्– ‘राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछिको आन्दोलनका बेला राजाविरूद्ध बोलेको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, कोइराला, एमालेका नेता युवराज ज्ञवाली लगायतलाई त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालको पछाडि पहरा गणमा राखिएको थियो ।
त्यतिखेर ओलीले उनीहरूलाई भेट्न गई ‘तपाईंहरू राजाविरूद्ध लडेर कहाँ सक्नुहुन्छ ? यो सब पार लाग्दैन हेर्नुहोस् । राजाले केही दिँदैन बरू कागज गरेर छुट्नुहोस्,’ भनेका थिए रे । अहिलेको परिस्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै त हैन तर केपी ओलीसँग दलहरूले कागजमा जानुपर्ने देखिएको छ ।
उनका आफ्नै सांसदहरू आफ्नो पद जोगाउन क्षमायाचना गर्दैछन् । कारवाही र स्पष्टीकरण त कति हो कति । मैले भनेको मान, मेरो कुरा सुन, म नै पार्टी, म नै हेड अफ द स्टेट हुँ भन्ने तानाशाही स्वभाव उनीमा प्रकट भएको छ भन्ने टिप्पणी भैरहेका छन् ।
यति मात्रै हैन रकेटको गतिमा मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र चुनावको मिति घोषणा गर्ने अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कदम चालियो । चुनाव जस्तो कुरा रातारात आफूखुशी घोषणा गर्नै यस्तो विषय हो र ? त्यो पनि यो कोभिडको समयमा जनताहरू आक्रान्त भएको समयमा भारत र अमेरिकामा निर्वाचन भएको उदाहरण दिँदै हतारमा निर्वाचनको मिति तोक्नु राजनीतिक मात्र होइन जनस्वास्थ्यको दृष्टिले पनि गलत छ ।
यो पनि अघिल्लोपटक पुस ५ मा संसद् विघटन गर्दा कसैसँग सल्लाह नै नगरी गरिएको निर्णयभन्दा झन् खतरनाक हो । ओलीले ५ पुस २०७७ मा विघटन गरेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै ११ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो ।